Ob.Baqqalaa Garbaa mana hidhaatii bayuun isaa mirkanaaye - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Ob.Baqqalaa Garbaa mana hidhaatii bayuun isaa mirkanaaye
Ob.Baqqalaa Garbaa mana hidhaatii bayuun isaa mirkanaaye
Olbaanaa Leellisaa ammas mana hidhaa jiraachuu isaati kan himamu
Sabboonaan Oromoon ob.Baqqalaa Garbaa erga bara 2011 kaasee mana hidhaa kan ture gadi lakkifamuun isaa gabaafameera. Ob.Baqqalaan hidhaa woggaa sadiifi baatii torbaa booda kan mana hidhaatii baye. Ob.Baqqalaan maatii isaatiin deebi’ee wolqunnamuun isaa mirkanaayeera.
Gama biraatiin, Ob. Olbaanaa Leellisaa, sabboonaan Oromoo inni biraa , erga 2011 kaasee hanga ammaatti mana hidhaa keessa jiraachuun isaa himameera. Ob. Olbaanaa Leellisaa hooggana ol’aanaa paartii Kongrasii Biyyoolessa Oromoo keessaa tokko turan.
Ob.Baqqalaa Garbaa yeroo qabamee hidhamutti itti-aanaa Worraaqsa Fedelaalistii Dimokraasii Oromoo turan. Yeroo adda addaatti akkuma gabaafamaa ture, Ob. Baqqalaa Garbaa, kan hidhaaafi dararaa yeroo dheeraatiif isa saaxile sodaa tokkoon alatti fundura motummaa dhaabbachuun mirga saba isaaf falmachuu isaati. Ob.Baqqalaan dhimmoota saamicha lafaafi sarbamiinsa mirga Oromoof irratti sagalee isaa olqabatee dubbataafi falmataa ture.
Ob.Baqqalaa Garbaa hidhaa itti murtaaye erag xumuree ture. Kana jechuun mana hidhaatii bayuun kan isarra ture yeroo dheeraa dura. Sun osoo hintaane hafe, garuu. Mootummaan sababni isa tursiiseef maal akka ta’e waan jedhe hinqabu. Taajjabdoonni garuu, seeraan ala yeroo dheeraaf erga tursiisanii booda ammatti, yeroo filannoon biyyoolessaa gaye kanatti, gadi lakkifamuun isaa mootummaan ergaa adeemsi siyaasa biyyattii fooyya’aa jira jedhu dabrsuu kan barbaade fakkaata jedhu.
As tuquun ob.Baqqalee dhaggeefadhaa
SOURCEVOA AFAAN OROMOO
Previous articleOMN ob.Leencoo Lataa wojjiin wa’ee ODF irratti gaafiifi deebii bal’aa geggeesse
Next articleGanzabee Dibaabaa fiigicha m5000 Carlsbad itti geggeeffame injifatte